Trano tsara tarehy mirefy 90 metatra toradroa, Accent voajanahary retro dia mahazo aina loatra | Famolavolana Stayliving - Faucets lakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Misintona Faucets ao an-dakozia
Sintomy ny fako an-dakozia
Faucets lakozia ao an-dakozia
Faucets ao an-dakozia
Fitaovana fandroana lakozia ao anaty bar
Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana
Faucets fandroana miely be
Faucets fandroana afovoan'ny Centerset
Faucets fandroana finday
Faucets amin'ny fandroana rano
Faucets fandroana fandroana sensor
Esory ny fandroana fandroana
Fametrahana Wowau Faucet
Login / voasoratra
Faucets milentika amin'ny rindrina
fikarohana Site Search
Home / Interior design / Trano tsara tarehy 90 metatra toradroa Trano tsara tarehy, Toetra voajanahary Retro Mahafinaritra loatra | Famolavolana maharitra
Trano tsara tarehy 90 metatra toradroa Trano tsara tarehy, Toetra voajanahary Retro Mahafinaritra loatra | Famolavolana maharitra
2021 / 08 / 13 FisokajianaInterior design 2772 0
Stayliving Interior Design Alliance
Ity no trano voalohany an'i Lili sy ny sakaizany. I Lili sy ny sakaizany dia samy eo amin'ny sehatry ny informatika, mazàna dia sahirana be amin'ny fiasana antoandro, ary mahalana vao mahandro. Lily dia tia ny fomba fiotazam-boaloboka ary manana hatsarana tsara. Nokapohinay avy hatrany izany nandritra ny fizotry ny famolavolana ary nilamina tsara ny fifandraisana. I Lily, toy ny zazavavy maro, dia nanonofinofy hanana valizy sy fandroana misaraka. Te hanana efitrano fandraisam-bahiny misy rakotra fatana izy. Afaka nanatanteraka ny faniriany tamin'ny endrika izy. Nilaza i Lily fa tsara ny mifanena amina mpamorona manana traikefa sy hatsarana tsara. Te hilaza aho fa tsara vintana aho manana mpanjifa mifampiresaka tsara sy matoky ny mpamorona.
Ny zoro mijery tsara indrindra ao an-trano, tsy misy haingon-trano kokoa noho ny rindrin'ny boky iray manontolo. Ny firafitra mifantoka amin'ny afon-dabozia sy ny sezalava ahazoana aina dia mahatonga anao maniry hody sy handry amin'ny sofa ary hamaky boky. Ny sofa tokana dia avy amin'ilay Lazyboy mitovy amin'ny Old Friends, tena ahazoana aina ary afaka mamelatra mandry.
Ny hazavana mpankafy valin-drihana koa dia tena tsara amin'ny fahavaratra. Ny trano avaratra-atsimo dia misy tsio-drivotra voajanahary amin'ny fahavaratra rehefa misokatra ny varavarankely. Ny latabatra dia avy amin'ny mumo, ary ny fatam-boky fohy eo akaikiny dia ampiasaina hametrahana mpilalao firaketana vinyl. Izy io dia manana rakitsoratra vinyl 9 misy azy.
Tena mahafa-po ny mody ary voahodidin'ny boky sy firaketana tianao indrindra.
Ny lakozia sy ny latabatra fisakafoana avy amin'ny lavarangana. Ny varavarankely ao an-dakozia dia vita amin'ny savoka aforitra. Mampita hazavana sy manana fiainana manokana ary tena haingo.
Be atao be ilay rangahy any am-piasana ary tsy mahandro firy. Betsaka ny tinady ilainy amin'ny tarehy ao an-dakozia, noho izany dia nisafidy ny mahandro fampisarahana fampisarahana tsy hita maso izy. Rehefa mampiasa dia hiakatra ho azy ny hood. Ity koa dia vahaolana tsara amin'ny olan'ny setroka avy any an-dakozia.
Latabatra fisakafoana avy amin'ny hazo mainty faharoa. Ny seza fisakafoanana tsirairay dia voafidin'ilay vehivavy tsara. Ny seza fisakafoanana miaraka amin'ny backrests haingon-trano arabo Eoropeana dia taratry ny tsiro tsy manam-paharoan'ny tompon-trano.
Tian'ny vahiny ny fomba fampiasa any Azia atsimo atsinanana. Ny fanaka dia vita amin'ny rattan vita amin'ny hazo sy hazo mafy. Ny lambam-baravarana koa dia nisafidy jamba hazo mafy, mora kokoa ny miala sasatra ny feo maizina. Amin'ny faran'ny fandriana dia apetraka ny vata fisarihana sy harona fitafiana maloto izay azo ampiharina tokoa. Ny voanio madinidinika dia mamela ny andriambavy izay mazoto miasa matetika hanana atmosfera fialantsasatra kely.
Ny efitrano fatoriana sy ny efitrano fatoriana faharoa dia nahena kely mba hampisaraka ny efitrano fidiovana sy fandroana misaraka. Ny efitrano fandraisam-bahiny kely dia manana fitehirizana matanjaka ary ny famolavolana misokatra dia tena mety amin'ny zazavavy manana akanjo be dia be hitady akanjo. Tsy dia lehibe ny faritra fandroana fa marefo ihany koa. Tao amin'ny toerana kely dia nifidy koveta fandroana voaorina izahay. Ny taila dia taila fotsy kely noforonina mba hialana amin'ny monotony.
Ny efitrano fatoriana faharoa dia misy farafara boaty. Toa ny kabinetra izany rehefa tsy misy olona manodidina ny andro faran'ny herinandro. Io dia manafaka toerana ho an'ny efitrano fanaovana hetsika na efitrano yoga. Misy koa ny arimoara eo akaikiny hitahirizana akanjo sy ny toy izany. Torohevitra avo lenta ho an'ireo mila mitazona ny asan'ny efitrano fandraisam-bahiny hampiasaina indraindray.
Ny vehivavy tompon-trano dia naniry ny fandroana manga ny navy. Nasiantsika taila manga tao amin'ny fandroana sy taila fotsy fotsy tany amin'ireo faritra hafa. Ny faucet ao anaty rindrina sy ny takelaka vato vita amin'ny rindrina dia manome fandroana madio sy madio ny fandroana.
Diagram Kisary momba ny firafitra voalohany
Fomban-drazana roa-efitra fatoriana, efitra fandroana roa, firafitra mahazatra ihany
Plan drafitra amin'ny gorodona
1, Andalana iray manontolo amin'ny fitoeran-drakitra fitehirizana no natao tao ambanin'ny varavarankely teo am-baravarana. Mampitombo ny fitehirizana ny fidirana izany, ary mametraka ny fitaratra feno amin'ny vatana, ny dabilio manova kiraro ary ny lamba mihantona koa.
2, ahena ny haben'ny efitrano fatoriana lehibe sy ny efitrano faharoa. Nanasaraka ny efitrano fidiovana sy fandroana misaraka izy io.
Nanokatra ny lakozia sy ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny latabatra fisakafoana dia apetraka ao an-dakozia. Mety ny mampiditra ny fisakafoanana sy ny lakozia.
4, Tapaho ny firafitry ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny efi-trano dia miorina eo am-patana. Dobo telo sy sofa tokana no voahodidina, mety kokoa amin'ny resaka sy famakiana. Misy latabatra lava lava napetraka eo akaikin'ny afon'afo. Mifanaraka amin'ny filan'ny olona 2 manao asa ao an-trano izany. Ny toerana eo akaikin'ny latabatra dia natokana ho an'ny fitoeram-boky sy mpilalao horonam-baravarankely.
5, Ny efitrano fatoriana dia ampiasaina amin'ny torimaso fotsiny. Ny efitra fatoriana faharoa dia foana ho an'ny yoga sy fisaintsainana.
Karazana tetikasa: efitra fatoriana 2
Mpamorona mpamorona: Echo
Maso ivoho famolavolana: Shenzhen StayLiving Culture and Creativity Co.
Faritra azo ampiasaina: 90 metatra toradroa
Toerana: Shenzhen, Guangdong
Vola haingon-trano: 300,000 RMB
Previous :: Ity OPEN Space ity dia manome fahafaham-po ny hevitrao rehetra. Feno "habaka miafina" Next: "Fotoana fanapahan-kevitra", trano fialantsasatry ny mpisava lalana eo ambanin'ny sary fanadihadiana | JK Lien Design
Volondavenona + Havoana Cardamom avo lenta, Tanora tanora sy avo lenta | Yuanhe D ...
2021 / 08 / 15 3207
Ny tranon'ny distrikan'ny sekoly dia mamaky ny "taloha sy efa rava" ...
2021 / 08 / 15 4083
Zavakanto fametrahana + singa voajanahary, mitaona sary an-tsaina tsy manam-petra an'ny Futu ...
2021 / 08 / 15 3605
Proposition kanto sy manankarena, mamolavola toerana onenana an-tanàn-dehibe | Drafitra SRDP
2021 / 08 / 14 3340
Simenitra Micro + Rattan, ampiasao ny firafitra hamoronana atmosfera habakabaka | DESIGN HURD
2021 / 08 / 14 3752
Akrilika miloko maivana, mandika ny hatsaran'ny zavakanto amin'ny haitao ankehitriny ...
2021 / 08 / 14 3147
您好!Midira raha miditra
Tsindrio hanafoana valiny
Faucets Sink miafina amin'ny rindrina
AO AMINAREO HAFATRA AO AMIN'NY INTERNET
MIFANDRAISA AMINAY ADD: 8 THE GREEN STE A, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. USA TEL: (213) 290-1093 E-mail: sales@wowowfaucet.com
Warranty 6-volana fanampiny
Zon'ny mpamorona © 2020-2025 WOWOW FAUCET INC. Zo rehetra voatokana.
Tongasoa eto amin'ny tranonkala ofisialy WOWOW FAUCET
Mifidiana ny volanao
CAD Dolara kanadiana